Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ọkwa egwu COVID-19 Hawaii sitere na elu ruo n'ọkara
Aviation • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • HITA • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Kama • News • Iwughachi • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ọnọdụ COVID Hawaii na -aka mma
The Aloha Steeti Hawaii esila n'ihe egwu dị elu gaa na ihe egwu dị n'etiti taa na ndepụta Covid Act Now.
Okwu COVID-19 nke Hawaii, ụlọ ọgwụ, na ọnwụ na-ebelata na ọnwa gara aga.
Steeti ruru ihe mgbochi igwe maka ịgba ọgwụ mgbochi gbasara ọnụ ọgụgụ ndị natara opekata mpe otu ọgwụ n'ime ụbọchị ole na ole gara aga.
Gọvanọ Hawaii David Ige ka na -atụ aro ka njem bụrụ naanị njem nke e chere na ọ dị mkpa.
Iwu Covid Ugbu a na-enye akara ihe egwu dị ise maka steeti na ógbè gafee mba ahụ ka ụmụ amaala na ndị ọrụ gọọmentị nwee ike ịghọta ọkwa COVID nke ọma na mpaghara ha. Mmekọrịta iwu ugbu a bụ 5 (c) (501) nke anaghị akwụ ụgwọ onwe onye nke ndị ọrụ afọ ofufo tọrọ ntọala na Machị 3. Iwu Covid Ugbu a bụ atụmatụ COVID lekwasịrị anya iji nyere ndị mmadụ aka ime mkpebi ziri ezi site n'inye data oge na nke ziri ezi gbasara COVID na US
Thebọchị 30 gara aga, Ọnụ ọgụgụ ikpe Hawaii, ụlọ ọgwụ, na ọnwụ na -ebelata. Mpaghara Honolulu, Hawaii, akọpụtala inwe akwa okenye ICU 156. 86 jupụtara ndị ọrịa na-abụghị COVID na ndị ọrịa COVID jupụtara 33. N'ozuzu, e mejupụtara 119 n'ime 156 (76%). Nke a na -egosi ụfọdụ ikike ịnabata mmụba nke ikpe COVID.
Steeti ruru ihe mgbochi igwe n'ime ụbọchị ole na ole gara aga site na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi nke 73.9% nke ndị bi na -anata opekata mpe otu ọgwụ. Na Honolulu County, Hawaii, mmadụ 720,162 (73.9%) anatala opekata mpe otu ọgwụ yana 647,576 (66.4%) bụ ọgwụ mgbochi. Onye ọ bụla dịkarịa ala afọ 12 tozuru oke ịgba ọgwụ mgbochi. Ihe na -erughị 0.001% nke ndị mmadụ natara ọgwụ nwere mmeghachi omume ọjọọ.
Ná nkezi, ọnụego ọrịa n'agwaetiti ndị ahụ dị 69% nwere ezigbo ule dị 3%. Enwere ugbu a ikpe 7.3 na -akọpụta n'ime 100,000.
Mpaghara Honolulu, Hawaii, nwere ọghọm dị ala karịa ọtụtụ ógbè US. Obodo nwere ọghọm dị elu nwere ọnọdụ akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe yana nke anụ ahụ nke nwere ike mee ka o sie ike ịzaghachi na gbakee na ntiwapụ COVID.
A ka kwesịrị izere njem ọ gwụla ma ọ dị mkpa, ma ọ bụ ndị njem na -agba ọgwụ mgbochi ọrịa nke ọma.
A na -atụ aro mkpuchi maka ndị nwere ọgwụ mgbochi n'ime oghere ime ụlọ ọha iji belata mgbasa nke ụdị Delta. Ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi ọrịa kwesịrị ịga n'ihu na -ekpuchi ihu na ebe ọha niile.
Ekwesịrị ịzere nnọkọ ime ụlọ na ndị mmadụ na -abụghị ezi ụlọ, belụsọ na agbachara ha ọgwụ mgbochi.
Schoolslọ akwụkwọ nwere ike ịnye mmụta mmadụ n'ime mmadụ n'enweghị nsogbu naanị mgbe usoro njikwa ọrịa a dị.